» किन गरिँदैछ चीनमा साङ्लाकाे खेती ?
किन गरिँदैछ चीनमा साङ्लाकाे खेती ?
३० असार २०७६, सोमबार ०६:१७
र, त्यसलाई परम्परागत औषधिका रुपमा प्रयोग गर्दै पिउन थालिएको छ । पेटको अल्सर, स्वासप्रसासमा अप्ठ्यारो तथा अन्य बिमारीमा त्यसको प्रयोग सुरु गरिएको छ । चिनियाँ प्रोफेसर लियुले भनेका छन्, ‘अहिले चीनको समस्या भनेको बुढ्यौली हो । हामी पश्चिमाहरुको भन्दा सस्तो औषधि खोजिरहेका छौँ । र, साङ्ला पालन सरकारी योजनाअनुसार नै सुरु भएको हो ।’
त्यसो त एकै ठाउँमा करोडौं साङ्ला पालिएको विषयमा विरोध पनि भएको छ । भूकम्प तथा कुनै मानवीय गल्तीका कारण यति धेरै किरा बाहिर आए नराम्रो हुने साङ्ला पालनको विरोध गर्नेहरुले बताइरहेका छन् ।